Igumbi lokulala eliphindwe kabini kuMgangatho we-Ensuite kwiLymm Village - I-Airbnb
Igumbi lokulala eliphindwe kabini kuMgangatho we-Ensuite kwiLymm Village
Igumbi lokulala elikhanyayo nelinomoya eline-attic elinegumbi lokuhlambela labucala kunye nendlu yangasese. I-100% yelinen yebhedi yekotoni. Ubushushu obuphakathi. Igumbi lokulala kunye ne-en-suite kuphela kwamagumbi akumgangatho wesibini wekhaya lethu losapho lakwa-Edwardian elicandekileyo, elifikelelwa ngummango onommango ovuthuzayo onekhaphethi onokuthi ungabalungelanga abantu abaneengxaki zokuhamba. Ingafanela isibini okanye umntu ngamnye. Amaxesha okukhangela evekini aphakathi kwentsimbi yesi-5 ukuya kweyesi-9 ebusuku kodwa iimpelaveki zinoguquguqukayo. Iindwendwe zinikwa isitshixo kumnyango wangaphambili ngexesha lokuhlala kwazo.
Igumbi leshawari linomzila wetawuli oshushu oneseti yebhafu & iitawuli zezandla ezisetyenziswa lundwendwe. Igumbi lokulala linekhabhathi enendawo eninzi yokuxhoma (ii-hangars zinikezelwe) kunye neeshelufu zezinye izinto. Kukho indawo yokupholisa iwayini ecaleni kwedesika yokubhalela yobisi olutsha olukhoyo kunye nakuphi na ukutya okanye iziselo iindwendwe ezinokuza nazo.
I-Lymm yilali entle ene-3 pubs kunye neendawo zokutyela ezininzi. Ime kwiCanal Bridgewater, malunga neekhilomitha ezili-15 kumazantsi eManchester kwaye kufutshane nothungelwano lwemoto kunye nesikhululo seenqwelomoya. Ilungele uhambo oluya emantla eWales, kwiSithili seLake kunye neSithili sePeak. Idama laseLymm, elijikelezwe yimithi kunye nemizuzu engaphantsi kwe-5 ukusuka endlwini, yindawo edumileyo yokuhamba, ngaphambi kokuba ubuyele elalini uyokuphunga ikofu okanye ulume ukuze utye.
We are a semi-retired professional couple whose family has now grown up and who share our home with our son Jack and little rescue dog, Dodger. Rose loves walking, playing tennis,…
Nangona ndiphume kancinci emini nangezinye iingokuhlwa, ndiya kuhlala ndikhona kuqala ekuseni nasemva kwemini/ngokuhlwa ukuba iindwendwe zifuna uncedo okanye iingcebiso.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lymm